ထီ၊အလောင်းအစား | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
ထီ၊အလောင်းအစား	ဒီနေ့ထီပေါက်ကိန်းရှိသလား။ ဒီလ,ထဲမှာ ထီပေါက်ကိန်းရှိသလား။
ကိုယ့်ဘဝမှာ ထီဆုကြီးကြီး ပေါက်ဖို့ကံပါသလား။ ဒီနှစ်ထဲမှာ (လောင်းကစား)လုပ်တာ အကျိုးရှိမလား။ ဒီနှစ်ထဲမှာ လောင်းကစားကိစ္စကြောင့် အဖမ်းအဆီးခံရဖို့ရှိသလား။
”ဒီပွဲ” မှာ ဝင်လောင်းရင် နိုင်မလား ၊ ရှုံးမလား။
ဒီဘောလုံးပွဲမှာ ( ) အသင်းဖက်က လောင်းရင် နိုင်မလား ၊ ရှုံးမလား။
ကိုယ့်ဘဝမှာ လောင်းကစား နဲ့ ထီ အကျိုးပေးတယ်လို့ ဆိုနိုင်မလား။
ထီဆုကြီးကြီးပေါက်အောင် ဘာအဓိဌါန်တွေလုပ်ရမလဲ။ အခုအပါတ်ထီမှာ ဘာဂဏန်း ”ထိပ်စီး” ကောင်းမလဲ။ အခုအပါတ်ထီမှာ ဘာဂဏန်း”အလယ်ထိုင်”ကောင်းမလဲ။
အခုအပါတ်ထီမှာ ဘာဂဏန်း”နောက်ပိတ်”ကောင်းမလဲ။ ဒီနှစ်ထဲမှာ ထီဆုသိန်းရာကျော်ပေါက်ဖို့ကံရှိမလား။ <br /> 42 comments on “ထီ၊အလောင်းအစား”	min min latt on August 25, 2010 at 8:54 am said:
ခိုင်ခင်စော on August 26, 2010 at 3:09 pm said:
ဒီနှစ်ထဲမှာ ထီပေါက်ကိန်းရှိသလား ဆိုတော့
(ပေါက်ဖို့ကံ သိပ်ကောင်းနေတယ်။ ဆုကြီးကြီးပေါက်နိုင်တယ်။ ထိုးသာထိုးပါ။ ) တဲ့
ဒီစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
saisai on August 26, 2010 at 7:46 pm said:
ဒီတစ်ပါတ်ဖွင့်မည့်ထီ အကြိမ်မှာ ထီပေါက်နိုင်ပါသလား
kyaw htin aung on August 27, 2010 at 9:51 pm said:
ံhla hla win on August 29, 2010 at 4:48 pm said:
eieikhin on August 31, 2010 at 9:16 pm said:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျမ အရမ်းကိုစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှ စိတ်ကိုသက်တောင့်သက်သာ
U Kan Tun on September 17, 2010 at 8:51 am said:
ဒီနှဈထဲမှာထီပေါကျကိနျးရှိ/မရှိသိလိုပါတယျ။ တနလာသား (၁၀-၁၂-၁၉၆၄)ခုနှဈဖှာွးဖဈပါတယျ။
May Zaw Ko on September 23, 2010 at 3:18 pm said:
စမ်းချောင်းလေး on September 27, 2010 at 4:40 pm said:
10လပိုင်း မှာ ထီပေါက်ကိန်းရှိလား…….
SuSu on October 18, 2010 at 12:21 pm said:
ဒီတစ်ပါတ်ဖွင့်မည့်ထီ (262)အကြိမ်မှာ ထီပေါက်နိုင်ပါသလာ:
zaw shane on October 24, 2010 at 4:22 pm said:
zaw shane on October 24, 2010 at 4:24 pm said:
Dr.Tin Bo Bo on October 25, 2010 at 12:01 am said:
zaw shane သို့
လာမည့် အသက်(၃၆)အတွင်း ကံကောင်းမည့် အချိန်ကာလမှာ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၂၃)မှ ဧပြီ (၂၈)အတွင်း တစ်ကြိမ်။ ဇွန်လ (၈)ရက်မှ သြဂုတ်(၁၈)အတွင်း တစ်ကြိမ်။ ကံကောင်းသော ကာလများဖြစ်တယ်။ ကျန်းမာရေး တစ်ချက် အညံ့ရှိတယ်။ ကျေးဇူးဆပ်ဖို့ မလိုပါ။
Ye Min on October 31, 2010 at 9:47 pm said:
ကျတော် ဒီပရိုဂရမ်ကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ. သုံးကြည့်ပါတယ်။ တခါမှ ကျတော့အတွက် မတိုက်ဆိုင်ခဲ.ပါဘူးဆရာ။ ဆရာစတင်ခတည်းကပါပဲ။ ဆရာ.စေတနာနဲ.တင်ပေးထားတာကို စော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာ။ ဆရာ.ကိုလည်းလေးစားပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်ဘူးတဲ့သူတွေထဲမှာ ကျတော်ပါချင်လို.ပါဆရာ။
Dr.Tin Bo Bo on November 1, 2010 at 9:50 am said:
မတိုက်ဆိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း ဟုတ်လိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ လူ(၁၀၀)မေးရင် (၁၀၀)လုံး မှန်အောင်/တိုက်ဆိုင်အောင် ဟောနိုင်တဲ့ ပရိုဂရမ်မျိုး ကျွန်တော် မဆွဲတတ်လို့ပါ။ (ဘယ်သူမှလည်း ဆွဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မထင်ပါ)။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ ထီအလောင်းအစား ကိစ္စဟာ “လောဘ”ပါနေတာကြောင့် မှန်ခဲလှပါတယ်။ ထီအလောင်းအစားအတွက် ဒီကဏ္ဍထဲက အဖြေတွေကို အားမကိုးသင့်ပါ။ (ဥပမာ-ဒီနေ့ဘာဂဏန်းထွက်မလဲ ဆိုတာမျိုး)။ ငါးပါးမှောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီဟာသာ မှန်မယ်ဆိုရင် ဆရာက အရင်ဆုံး ချမ်းသာနေပြီလေ။
အောင်ဇော်ဦး on November 7, 2010 at 11:27 am said:
pye phyo kyaw on November 7, 2010 at 11:55 am said:
hein htut zin on November 22, 2010 at 4:39 am said:
၂၀၁၁ ဇန်န၀ါရီမှာ မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး လျှပ်စစ်ပစ်စီးဆိုင်ဖွင့်ချင်ပါတယ်။ အောင်မြင်အကျိုးပေး
မလား သိချင်ပါတယ်။ Aircon servicing လုပ်ငန်းလည်းလုပ်ချင်ပါတယ်။ဘယ်ဟာက ပိုပြီး အကျိုးပေးမလဲ သိချင်ပါတယ်။ဟူရားဂဏန်းက ၉၀။ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ဆရာ။
hein htut zin on November 22, 2010 at 4:41 am said:
waiphyokyaw on November 23, 2010 at 12:39 pm said:
winkoko on January 14, 2011 at 12:49 pm said:
ကျနော့မွေးနေ့ က 4.2.1981 ပါ ကျနော်သိချင်တာက ဒီနှစ်မှာအလုပ်လုပ်ရတာ သိပ်အဆင်မပြေသလိုဖြစ်နေပါတယ် ပိုက်ဆံရတယ်ကုန်တာများနေတယ်ဗျ
လေးများရှိရင် သိချင်လိုချင်ပါတယ်ဆရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တေဇာတေ on January 20, 2011 at 10:37 pm said:
မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျွန်တော်ထီတော်တော်ပေါက်ချင်နေပါတယ်။ မထိုးစဖူးအထိုးထူးလို့ထိုးနေတာ ၁၅ ခါလောက် အတိအကျပြောရရင်တစ်လမှာ တစ်ခါတော့အနဲဆုံးထိုးဖြစ်နေတယ်။ တစ်ခါကတော့ပေါက်တယ်ဒါပေမယ့်အရင်းပဲပြန်ရတယ်။
တစ်ကြိမ်ထက်မကပေါက်မယ်တဲ့။ အားတက်စရာပဲ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ကံကောင်းမယ့်အချိန်လေးတစ်ချက်လောက် တွက်ပေးဖို့မေတ်တာရပ်ခံပါတယ်။
kowailu on March 1, 2011 at 8:53 am said:
My date of birth is 26.07.1961 – Time is 1609 Pm.May I know when I have to stop working. I pray always I have enough money ( get lottery ) over 50 Years.It’s possible?
fachri_fairuz on March 1, 2011 at 8:59 am said:
I’am Idonesia man.
May I know I have some problem for medical case.Can I get compesation money?Also how about Job ( Lost or continous ? )
ရန်ပိုင် on March 6, 2011 at 1:55 pm said:
ဆရာ ကျွန်တော့်က 26.8.1981 ခုဖွားပါ ဒီနှစ်ထီပေါက်ကိန်းရှိပါသလား
မသန်းသန်းနွယ် on March 6, 2011 at 2:27 pm said:
ဆရာ ကျွန်မက 1.12.1978 ခုဖွားပါ ဒီနှစ်ထီပေါက်ကိန်းရှိပါသလား
နေလင်းအောင် on June 22, 2011 at 9:56 pm said:
ကျနော် 10.10.1990ခုဖွားပါ ကျနော်ရော ထီပေါက်ကိန်းရှိလားဗျ
မေသူ on July 2, 2011 at 7:10 am said:
သော် on July 2, 2011 at 7:11 am said:
Khin Thazin Kyi on July 5, 2011 at 1:54 pm said:
I believe your prediction. I interested in Maharbote. (sorry, I can’t write in myanmar font). I’m Buddhism and everyday I worship our Buddha.
AUNG MYINT on August 12, 2011 at 6:56 pm said:
ဒီနှစ်မှာထီပေါက်ကိန်းရှိသလား? 11.1.69 ရှိရင်အကြောင်းပြန်ပေးပါ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
Ma thida htike on August 31, 2011 at 10:32 am said:
aung myo khine on February 10, 2012 at 11:28 am said:
Dear Sayar ,
I ‘dlike to know my lucky no: for myanmar lottery that will be open in 1st march 2012.
I am looking forward for your reply and
your kindly attention is much appreciated.
aung myo khine on February 10, 2012 at 11:32 am said:
My birth date is 20.6.1971
Wai Wai on May 18, 2012 at 11:05 am said:
သမီး ဒီလထဲမှာ ထီးပေါက်ကိန်း အသေးဆု ပေါက်မယ်ဆိုလို့
မွေးနေ့ – 29.6.1991
Thein Than on January 16, 2013 at 11:52 pm said:
ဒီလထဲမှာထီပေါက်နိုင် ပါသလား? ကျေးဇူးပြု၍ဖြေကြားပေးပါါခင် ဗျာ.မွေးနေ့24 /9/1985
thihahtun211 on January 20, 2013 at 2:04 pm said:
ဒီနှစ်ထဲထီပေါက်ကိန်းရှိပါသလားခင် ဗျာ။ မွေးနေ့ 19-3-91
phyo phyo Zin on February 7, 2013 at 1:23 pm said:
ဒေါက်တာဇင်ဝေ နဲ့ ဆရာက တစ်မြို့ ထဲသား ဖြစ်တဲ့အပြင် လူပုံပါတူနေလို့ အံ့သြမိကြောင်းပါ
Dr.Tin Bo Bo on February 7, 2013 at 1:25 pm said:
မတူတာ တစ်ခုရှိသေးတယ်။ သူက အခုချိန်ထိ လူပျိုကြီး။ ဆရာက ကလေး(၄)ယောက် အဖေ။
Tin Tin Aye on February 22, 2013 at 9:56 pm said:
သန်းထွန်း on March 14, 2013 at 8:01 pm said:
ဆရာ ကျွန်တော်ကံ ကောင်းမကောင်းတချက်လောက်ကြည့်ပေးပါ့လား ဆရာ ခုနှစ်က 1981ပါ သြဂုဏ်လ21ပါကျွေးဇူးပါ ဆရာ
သက်နိုင်ထွန်း on April 23, 2013 at 1:07 pm said:
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,761)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,424)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,204)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,047)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,071)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,383)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,207)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,713)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,752)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,408)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,356)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,216)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,164)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,134)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,456)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,414)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,083)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,908)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,763)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,755)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,292)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,896)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,783)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,744)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,610)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,567)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,354)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,178)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,162)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,064)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !